Malunga nathi - iShanghai Comi Aroma Co., Ltd.
I-COMI AROMA yinkampani yokubonelela eyasekwa eShanghai, China ngo-2010. Ikomkhulu eShanghai, eFektri eXuzhou, China. Ukusukela oko kwaqalwa, besisaziwa kakhulu ngeeMveliso zeGlasi yeFlint, nangona kunjalo namhlanje, ngokufikelela kumaziko angaphezulu kwama-25, sinokufumana iiodolo zazo zonke iimilo, ubukhulu, kunye nemibala kwimiqulu emikhulu unyaka wonke. Oku kusenza ukuba sikwazi ukukhonza amashishini amaninzi ahlukeneyo kubandakanya izithambiso, into yokuhambisa, iziqholo, ityhubhu yeglasi, kunye neyeza, kunye nebhotile ye-dropper. Siqinisekisa ukuba zombini isiko lethu kunye nezinto zesitokhwe zenziwe zikumgangatho ophakamileyo kwaye ziyafumaneka rhoqo eAmber, Green, Flint, kunye neCobalt Blue.
Ngokukodwa, i-COMI AROMA ibonelela ngeebhotile zeglasi, izikhongozeli, kunye nezinto ezisetiweyo ezipheleleyo (iidropha, iipompo zenkungu, iimpompo zokutshiza, iintonga zefayibha zevumba, izinti zeerattan, izivingco kunye neekepusi). Phantse amashumi eminyaka yamava kushishino lokupakisha, sinikezela ngemveliso esemgangathweni ophezulu kunye nezinto ezintsha zokupakisha zobuhle behlabathi kunye neempawu zolusu.
Zonke izibonelelo zethu zobugcisa bokuvelisa, ziyahambelana nemigangatho yase-US kwaye ziqinisekisiwe yi-US FDA ukuze sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nakwamanye amazwe. Ukongeza, i-COMI AROMA yamkele itekhnoloji yokugquma umphunga oshushu, itekhnoloji yokutshiza isiphelo ebandayo, kunye netekhnoloji yonyango ecebise ityebile. Indawo yethu yokugcina izinto esineenyawo ezingama-100,000 + apho sigcina iiyunithi ezingaphezu kwezigidi ezingama-50 zemveliso ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi kwangoko kunye nokugcina amaxesha amafutshane akhokelayo.
Njengoko iCOM AROMA iqhubeka nokukhula, sizama ukufezekisa zonke iimfuno zabathengi.
Uhambo oluMnandi lokuPakisha, Umsebenzi owonwabileyo kunye neCOM AROMA!
Nceda unxibelelane nathi ngayo nayiphi na imibuzo.